N'ime ụlọ osisi | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | September 2019
Atiya N'ime ụlọ osisi
Kedu ka esi eto mkpụrụ osisi: kụrụ na nlekọta ọzọ
Plumeria, ndị toworo eto na aka ha, bụ onyinye n'ezie nye ndị hụrụ nke osisi ahụ. Ugbo ohia nke ohia di n'ime ebe ndi ozo ga-enwe ike ime ihe na-adi nma na ima mma ya na odoko okooko osisi. Iji mee nke a, ọ dị gị mkpa ịkụ mkpụrụ ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma nye nlekọta kwesịrị ekwesị maka osisi ahụ.
Aro maka nlekọta nke violet n'ụlọ
Saintpaulia bụ nnukwu ụlọ ime ụlọ ma mara aha Saint Baroque violet. Ihe dị ka puku osisi iri abụọ na abụọ nke osisi a dị taa. Mana ozugbo ị zụtara violet, ajụjụ ahụ bilitere ozugbo: "Olee otu esi echebara ya anya nke ọma?". Ịhọrọ ebe kachasị mma maka Saintpaulia Nsogbu mbụ bilitere ozugbo ọ pụtachara na violet dị n'ụlọ bụ nhọrọ nke ebe obibi ya.
Lush bushes "Vanya wet", na-elekọta maka ifuru n'ụlọ
Balsam (Impatiens) bụ ụlọ anyị maara n'oge anyị bụ nwata. A na-asụgharị Latin aha Impatiens dị ka "touchy", n'ihi na mkpụrụ osisi balsam na-agbasasị n'akụkụ dị iche iche ma ọ bụrụ na i metụrụ ha aka. A na - ejikarị ifuru a na nwata, n'ihi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nne nne ọ bụla nọ n'ụlọ nwere "Ọkụ", dịka a na - akpọ ya.
Ọ nwere ike ịkụnye lily n'ụlọ?
N'ihi ọdịdị ya na-adịghị ahụkebe, ịma mma na-adọrọ adọrọ, a na-ewere lilies dị ka ihe nnọchianya nke ịdị ọcha na ịdị ọcha. Ruo ugbu a, okooko osisi ndị a na-achọ ememme dị nsọ na ememe nke ọtụtụ okpukpe. Ọ ga - ekwe omume ịkụ lily n'ụlọ? Lily na - eme ka ụlọ dị mma, ọ bụghị naanị na mma okooko osisi na ncha ihu ọma, kamakwa ya na - esi ísì ụtọ.
Pelargonium: lekọta, ozuzu, kwachaa
Ala nna nke pelargonium bụ India na South Africa. Osisi okooko osisi a na-egbuke egbuke na-ama ihe mara mma ma na-esi ísì ụtọ, kamakwa maka ihe ndị na-agwọ ọrịa, ndị ọkachamara kweere na pelargonium n'ime ụlọ na-achịkwa ọnọdụ ihu igwe na ezinụlọ. Ụdị Pelargonium Pelargonium bụ osisi nke geranium ezinụlọ.
Ogologo oge a na-enweta obi ọmịiko nke ndị hụrụ ụlọ ụlọ. Ọ dị iche n'icheghị ihe ọ bụla na-apụ, ịma mma na onyinyo nke okooko osisi. Site na ya onwe ya, primrose dị elu nwere ike iru 25 sentimita. Usoro mgbọrọgwụ bụ fibrous, rosette epupụta, ihe dịka 7 cm n'obosara. Primrose blooms ugboro abụọ n'afọ - na mmiri na oyi.
Nzuzo nke ịgha mkpụrụ na ilekọta beret ime ụlọ
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ osisi na osisi okooko osisi, mgbe ahụ, euenoos anaghị enwe ike 'ịchọta anya gị', mana maka ndị na-ahụ maka oge ọ bụla, ọ bụ ihe ị chọrọ. Osisi ya dị obere ma bụrụ ndị na-enweghị isi, ma ọ ka nwere ike ịbụ nnukwu ihe mgbakwunye na ubi gị ma ọ bụ ụlọ "griin ha". Ọ ga-amasị m ịkọwa nhọrọ ikpeazụ maka nkọwa zuru ezu.
Ihe ị chọrọ ịma mgbe ị na-akụ ma na-eto eto dollar, ndị na-akụ mkpụrụ osisi na-eto eto
Taa, anyị ga-agwa gị ihe nzuzo nke ịkụ mkpụrụ ma na-eto eto "dollar". Ị ga-amụta isi ihe nke nlekọta na ịzụlite, yana ihe ole na ole na-adọrọ mmasị banyere osisi ahụ. Ị ma? N'afọ 1908, onye nduzi nke Ogige Botanical nke Berlin, Adolph Engler, nyere aha nke oge a na osisi nke natara ya n'ihi nhata nke epupụta na akwukwo oyi.
Ixora bụ ebe okpomọkụ, aha ya bụ chi chi Hindu. N'ihi ọdịdị ya, a na-ewere ifuru a dịka ụlọ osisi kacha mma. Ixora bụ osisi shrub ogologo, nke nwere ihe dị iche iche na-acha aja aja na ụbụrụ na-edo edo.
Igbe ụlọ: ilekọta na ịzụ ihe
Onye ọ bụla n'ime anyị maara nke ọma na osisi a na-eji na-ewu ogige, a na-akpọ haywood evergreen. N'oge na-adịbeghị anya, boxwood malitere itolite dị ka ụlọ osisi n'ime ite. Obere akwukwo, ngwa ngwa na ikike nke ikpocha isi na-enye gi ohere igbue osisi dwarf.
Otu esi eto anthurium, iwu nke na-eto ma na-elekọta ifuru
A na-akpọ anthurium ụlọ osisi na-egbukepụ egbukepụ na-egbukepụ egbukepụ, bụ nke dị ka plastic sitere n'ebe dị anya. Osisi okooko osisi na-acha anya, ekele maka osisi ha, nke a na-akpọ "ifuru flamingo." Ọnọdụ na-eto eto kachasị mma Ka osisi wee nwee ike ime gị obi ụtọ ọ bụghị naanị na-acha akwụkwọ ndụ na-egbukepụ egbukepụ, kamakwa ya na okooko osisi mara mma, ọ dị mkpa iji mezuo ọnọdụ niile maka ịmalite ya.
Isi ọrịa na pests nke anthurium
Anthurium bụ ifuru osisi na-ewu ewu nke si n'ebe dị anya nke ebe ndịda nke South na Central America. N'ihi ụda dị egwu, anthurium na-eto eto na ụlọ, ma n'ihi àgwà dịgasị iche iche, osisi a nwere ike ịdaba n'ụdị ọrịa dị iche iche. Iji ghọta otú ị ga-esi chekwaa anthurium ma ọ bụrụ ọrịa, ị kwesịrị ịma ihe ha bụ.
Otu esi akụ na-eto eto Caladium n'ụlọ, ndụmọdụ gbasara ilekọta ebe obibi ebe okpomọkụ
Ebee ka ịchọta ala ala, nhọrọ nke ebe osisi Caladium thermophilic (Caladium) bụ onye nnọchiteanya nke ezinụlọ Aroid (Araceae). Ala nna nke osisi a bụ Brazil, ebe ọ na-etolite n'akụkụ osimiri Amazon. Nke a bụ nnukwu osisi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, nke na ọnọdụ dị ala nwere ike iru mita ise n'ogologo. N'ụlọ, a na-eji Caladium eme ihe maka nchịkọta nke starch, na mpaghara anyị, osisi a na-ewu ewu n'ihi ọdịdị mma ya.
Ihe kpatara edoing na ihicha nke hydrangea epupụta
Hortensia - ifuru okooko osisi, nke nwere ihe dị ka 90 ụdị. Otú ọ dị, iji mee ka anya gị dị mma, ị ga-arụ ọrụ siri ike, ma ọ bụghị ya, akwụkwọ hydrangea ga-amalite ịcha edo edo, nkụ, osisi ahụ ga-anwụkwa kpamkpam. Ntak emi hydrangea akọrọ? Ihe kpatara ya nwere ike ịbụ ọtụtụ, n'etiti ha: Ogbenye mmiri; Mmiri oyi n'ime ụlọ ebe hydrangea na-etolite; Ezughị oke transplant; Ehie ọkụ; Enweghi nkwado fatịlaịza nke ala (belata acidity); Enweghị mkpịsị akwụkwọ nke akwụkwọ; Nhọrọ na-ezighi ezi nke ala maka akuku.
Njirimara bara uru nke Kalanchoe
Ọ bụ mmadụ ole na ole maara, ma osisi Kalanchoe abụghị naanị na ọ bụ ihe mmezi nke ụlọ, kama ọ pụkwara inye aka gwọọ ọrịa dị iche iche. Osisi anụ ahụ nke Kalanchoe nwere uru bara uru. Ihe ọṅụṅụ ha bụ ihe dị mkpa maka ọgwụ ndị e nyere maka ndị okenye na ụmụaka. Enwere ike ịkwado ya n'ụlọ ma ọ bụ zụta ya na ụlọ ọgwụ.
Nkọwa nke Kalanchoe kacha ewu ewu
Kalanchoe bụ osisi nke ndị ezinụlọ colossae, bụ nke si n'oké ọhịa ndị dị n'Eshia, America na Australia bịa Europe. N'oge na-adịbeghị anya, ọ malitere ịzụlite dị ka ụlọ osisi, nke na-adọrọ mmasị na ọdịiche ya. Ụdị Kalanchoe na-anọchite anya ihe karịrị 200 aha, ọ bụghị agụta iche na adọ ụdị ụfọdụ.
Iji aloe mee ihe na nkà mmụta ọgwụ
Aloe bụ ụlọ na-ewu ewu nke na-eto eto maka iji mee ihe bara uru. E nwere ihe karịrị ụdị osisi 350 a; n'ụlọ, ọ bụ naanị ụfọdụ n'ime ha na - eto eto, na - agafe, na - agagharị, na - agbachi. Njirimara na-agwọ ọrịa dị n'ime aloe vera na aloe. Akwukwo aloe vera nke kachasi elu, nke a makwaara dika Barbados ma obu aloe.
Ụdị ụlọ begonias
Begonia bụ otu n'ime osisi ndị kachasị mma ma mara mma na ụlọ windo, na ubi na ogige ntụrụndụ nke obodo ahụ. Osisi a nwere ihe di iche iche di iche iche di iche iche na 2000. Ọ bụ Michel Begon kọwaziri ifuru ahụ, bụ onye chọpụtara na ọmarịcha ifuru na Antilles.
Kwesịrị ekwesị ma na-elekọta Coleus
Coleus bụ osisi okooko osisi, mana ọ dị oké ọnụ ahịa ọ bụghị maka okooko osisi, dị ka ihe dị na ya na mkpụrụ osisi. Ka o sina dị, ịma mma nke Coleus bụkwa ọtụtụ uru ndị ọzọ. O nwere ike ịbụ ma n'ime ime ụlọ na ogige, na na ikpe abụọ ahụ ị gaghị enwe ihe isi ike na nlekọta, nke ọbụnadị ọ bụla novice nwere ike ijikwa (ọ bụrụ na ọ ghọtara na ị na-eme nri).
Ndepụta nke heliotrope kacha mma
Okpokoro osisi olulu nwere ike ime ka ọ bụghị naanị ịma mma ha, kamakwa ha na-esi ísì ísì ụtọ. Na ala a na-emeghe, ha nwere ike ịmalite dị ka osisi kwa afọ, ọ bụ ezie na n'ime ite, ha nwere ike ịmalite dị ka perennials. Na mba anyị, Heliotrope Peruvian bụ ihe a na-ahụkarị, ụdị nke a na-atụle n'isiokwu a.
Isi ọrịa na pests nke amaryllis: mgbochi na ọgwụgwọ
Amaryllis si n'Afrika, ya mere o nweghi ike itinye oge oyi n'ime oghere - o ga-anwu. Ha na-eto eto osisi na ulo na windo sulu ma obu na-eguzo maka mkpuru osisi, n'èzí ọ ga-adị mma naanị n'oge ọkụ. Nsogbu mgbe nile mgbe ị na-eto amaryllis, otu esi ewepu ha Ọtụtụ mgbe, ọrịa na-ekwesịghị ekwesị kpatara ọrịa amaryllis.
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ N'ime ụlọ osisi